ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် - က rayhab ဖြစ်ပါသည်
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘီးအဖွဲ့ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပူဘွိုင်လာ၏ကို Maintenance နှင့်မီးရှို့ခံရသောလုပ်ငန်းဘူတာ »
Entity ပြန်ကြားရေးချုပ်ဝင်အပိုဒ် 1-
1.1 ။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity;
က) အမည် TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
ခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Izmir Alsancak
ဂ) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (0232) 463 16 00
ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0232) 463 22 48
င) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ: İzmirlimansatinalma@Gov.t။ ဃ။
f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: အေ Kadir GÖKDUMAN / ဆိပ်ကမ်း Buss ။ လက်ထောက် Manager ကို ../ B.KURT- ယ်ယူခြင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး
က) အမည်: လောင်စာဆီ (ဒီဇယ်) Reception
ခ) IRB အမှတ် 2019 / 403013 မှတ်တမ်းတင်
ဂ) ပမာဏနှင့်အမျိုးအစား: 2.000.000 ဒုရေနံ (ဒီဇယ်)
ဖြန့်ဝေ၏ဃ) အဆိုပါနေရာအရပ်: TCDD İzmir Alsancak İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
ဝယ်ယူရေး၏ခ) လိပ်စာ: TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု / Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Alsancak / IZMIR
ဂ) တင်ဒါနေ့စွဲ: 10 / 09 / 2019
င) နောက်ဆုံးနေ့အချိန်: 14: 00 '' တက်
f) ယုယကော်မတီအစည်းအဝေး Place: TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးကုန်စည်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးခန်းကြမ်းပြင်5Alsancak / IZMIR
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆီထောက်ပံ့ရေးစီးပွားရေးနှင့်အတူဆီစားသုံးမှု Automation စနစ် (ATOS) 28 / 05 / 2018 လေလံ AND SUBJECT ကို FOR လောင်စာဆီထောက်ပံ့ရေးစီးပွားရေးနူးညံ့မှုနှင့်အတူဆီစားသုံးမှုxnumx.bölg Automation စနစ် (ATOS) ၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 အရေးကြီး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှု Haydarpasa ခ) လိပ်စာ: ကော်မရှင်၏ဗျူရိုဘူတာအဆောက်အအုံ TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှု Haydarpasa / အစ္စတန်ဘူလ်က c xnumx.kat) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (1.1) 1 13ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0216) 337 82 14 င) e-mail လိပ်စာ: - အမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်၏, f) သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ: ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Suat AKCAN ကော်မရှင် 0216 ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုအပေါ်လေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီ 450.000 လီတာဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 12 / 03 / 2013 လောင်စာဆီ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု 450.000 လီတာအကြောင်းအရာကိစ္စအပိုဒ် 1- ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု 1.1 နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစျေးပြိုင်တင်ဒါနှင့်ပြဿနာများဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Alsancak IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (0232) 463 16 00 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0232) 463 22 48 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: İzmirlimansatinal Up ကို @ gov.t. ဖြစ်ပါသည် ဃ။ f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: စာသားÖZYILMAZဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး။ 1.2 ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်အရေအတွက်ကိုမှာဝယ်ယူရေးအရာရှိများနှင့်ဆက်စပ်သောလေလံသတင်းအချက်အလက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 28 / 03 / 2013 လောင်စာဆီသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧည့်ခံ 4734 အမှတ်ဝယ်ယူရန်ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်စက်ရုံညွှန်ကြားမှုဒီဇယ် (အရည်လောင်စာ) SİVASဝယ်ယူပါလိမ့်မည်ဒါဟာပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 28108 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: တူရကီလမ်းမကြီး7။ ဗဟိုကီလိုမီတာ / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462270316 - 3462270787 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/: ငါ့အ svsbtf@hotmail.co ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည် 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 10 / 06 / 2013 TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်းဆီစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုအဆိုပါအမိန့် Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲအပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေး TO သို့ RELATED နူးညံ့သော, ပြဿနာများကိုပါလိမ့်မယ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Atatürk Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 97 Alsancak IZMIR ဂ) တယ်လီဖုန်းအရေအတွက်ကို: (0232) 463 16 00 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: (0232) 463 22 48 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: İzmirlimansatinal Up ကို @ gov.t. ဖြစ်ပါသည် ဃ။ f) သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမည်နှင့်အမညျ / ခေါင်းစဉ်: Birol BAFRA- ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး။ 1.2 ။ အထက်ပါလိပ်စာနှင့်အရေအတွက်ကိုမှာအဆက်အသွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်းနုသတင်းအချက်အလက်အတွက်လေလံ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 11 / 07 / 2013 လောင်စာဆီ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်မည်သည့်ညီမျှသောပစ္စည်းဇုန်ရုံးယူရိုဒီဇယ်လောင်စာဆီအမှတ် 4734 ဧည့်ခံဧည့်ခံအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 80383 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgemudurlug .gov.tr ​​ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့် ...
လောင်စာဆီဝယ်ယူပါလိမ့်မည်, TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆီထောက်ပံ့ရေးစီးပွားရေးနှင့်အတူဆီစားသုံးမှု Automation စနစ် (ATOS)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လောင်စာဆီ 450.000 လီတာဝယ်ယူပါလိမ့်မည်